गृह मन्त्रालयले माग्यो १७६ कर्म चारी: १२ पास भए मात्र पनि पुग्ने, तलब ३६ हजार ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Employement Opprotunity/गृह मन्त्रालयले माग्यो १७६ कर्म चारी: १२ पास भए मात्र पनि पुग्ने, तलब ३६ हजार !
काठमाडौँ – राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जी`करण विभागले १ सय जना भन्दा बढी जनाको लागि दर`खास्त आ`ह्वान गरेको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले १ सय ७६ जनाको लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो।
बुधबार गोरखा पत्रमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र उपल`ब्ध गराउने कार्यक्रम अन्तर्गत घुम्ती सेवा सञ्चालनका लागि करारमा दर्ता अपरेटर चा`हिएको जनाएको छ।
१२ कक्षा पास गरेको र १८ वर्ष पूरा भएर ३५ वर्ष नना घेकाहरुले दरखास्त दिन सक्नेछन्। द रखास्त दिनेहरु कम्प्यु`टर सम्बन्धि कार्य गरेको र कम्प्युटर सम्बन्धि तालिम समेत लिएको हुनुपर्नेछ। नियुक्त हुनेहरुले दैनिक १२ सय पारिश्रमिक उप`लब्ध गराइने र सार्वजनिक बिदामा पनि काम गर्नुपर्ने छ।
अन्य विवरण निम्नको सूचनामा छ –